Home Wararka Somaliya Ciidanka Booliska ee Degmada Guriceel oo soo saaray Amaro Cusub
Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel ee Gobolka Galgaduud Cismaan Cali Hudeey oo Amarada soo saaray ayaa marka hore sheegay in Amniga guud ee degmada uu yahay mid wanaagsan, isla markaana ay ka wada Shaqeeyeen Ciidamada & Shacabka.
Taliyaha ayaa ku dhawaaqay Amaro la xiriira dhanka amniga, kuwaas oo lagu soo rogay bulshada degmada ku nool, sida gaadiidleeyda iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Waxaa uu ku amray gaadiidka aada dhinaca degmada Guriceel in muddo 15 Cisho gudahood ah ay isku soo diiwaan geliyaan, sidoo kale in Caruurta ka yar 15 sanno aysan socon karrin Magaaladda wixii ka danbeeya 09 fiidnimo kadib markii ay soo bateen Carruurta dhagaanta ku tuuraya Gaadiidka.
Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel ee Gobolka Galgaduud Cismaan Cali Hudeey ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab.
Amaradaan kasoo baxay Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel ee Gobolka Galgaduud Cismaan Cali Hudeey ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab la sheegay inay kusoo dhawaadeen degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Previous articleCiidanka Galmudug iyo kuwa Dowlada oo Deegaano Cusub la wareegay Maanta
Next articleMadaxweynaha Galmudug oo gaaray Deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud sida Baxdo